Hirdanka Somaliland Iyo Puntland
Ilaa markii uu Madaxweynaha Somaliland Ahmed Mohamed Mohamud Siilaanyo iyo weftigiisu booqdeen magaalo xeebeedka Laasqoray waxaa Puntland ka soo baxayey werwer iyo walaac ku saabsan safarkii Siilaanyo oo ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen.
Puntland waxay bilowday dagaal afka ah oo ay ku sheeganayaan in magaalada Laasqoray ay tahay degmo ka tirsan Puntland, waxayna ciidamo soo tubeen jiidaha hore ee Galbeedka Hadaaftimo, iyagoo ku sababeeyey inaanay marnaba u ogolaan doonin booqasho la sheegay in Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland Ahmed Xaaji Cali Cadami (Ugaaslabe/Bin Jacfar Al Makhzuumi) ku imanayo magaalada Hadaaftimo, Badhan, iyo Haylaan (Qabriga Shiikh Daarood).
Wasiir Cadami oo maalmahan ku sugnaa Ceerigaabo ayaa la sheegay inuu u boqoolay Hargeysa si uu u soo kaxeeyo Riig-Biyood loogu deeqay magaalada Badhan, dhaqsana uu ugu soo noqonayo si biyo la'aanta ka jirta haalkaasi wax looga qabto.
Dhanka kale Ciidamo Somaliland ah ayaa gaadhay Magaalada Carmale oo qiyaastii 50 KM Bari ka xigta magaalada Ceerigaabo, ciidankan oo watay 75 baabuurta gaashaaman ah ayaa ka koobnaa Guutada 22aad, Guutada 6aad iyo Guutada 97aad, waxaana ciidankan hogaaminaya Taliyaha Ciidanka Qaranka Ceerigaabo Gaashaanle Sare Mohamed Diiriye Xasan (Bihidoor/Warsangeli).
Ciidan kale oo uu wato Gashaanle Sare Gurey Cismaan (Reer Garaad/Warsangeli) ayaa qayb ka mid ahi fadhiisin ka dhigteen magaalada Badhan.
Ciidan xoojin ah oo uu watey Gaashaanle Xayle (Bah-Ugaaslabe/Warsangeli) ayaa iyaguna xalay galay magaalada Badhan gudaheeda, halka Ciidankii Gaashaanle Siciid Cabdi Warsame (Bah-Ugaaslabe/Warsangeli) ay fadhiisinka ka sameysteen goobti ciidamada Puntland ay ka carareen ee Galbeedka Hadaaftimo.
Waxa kaloo wadada xeebta Maydh-laasqoray maray ciidan uu hugaaminayo Gaashle Ina Otan (Cabdi Xaamud/Habar-Yoonis), ciidankaasina waxay degeen aagga xeebta Laasqoray.
Ilma Foodhaadhi, Ilma Faras ka bood, Ciidamadii Puntland ee joogay Hadaaftimo iyo Nawaaxigeeda ee qorshahoodu ahaa iney is hortaagaan Booqashada Cadami ee Badhan ayaa ka shubay markey maqleen guuxa iyo daryanka aaladda ciidamada Soomaliland.
Madaxdii ciidamadaa Puntland wadatey meel ay jaan iyo cidhib dhigeen ilaa iyo iminka lama hayo, in kasta oo wararka Alldhooftinle soo gaadhaya ay sheegayaan inay ku noqdeen xeryihii ay ka yimaadeen ee ku yaalay Garoowe.
Cali Jarafle Bin Jacfar AlMakhzuumi